Little Green Riding Hood, lalao maimaim-poana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store | Vaovao IPhone
Ny kely indrindra amin'ny trano indray no kendren'ny lalao nofidian'i Apple hisintona maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra mandra-pahatongan'ny alakamisy ho avy izao, rehefa hanolotra lalao na fangatahana hafa hisintomana ireo zazalahy avy amin'ny Cupertino nefa tsy mandoa euro iray akory. Little Green Riding Hood, dia lalao natao ho an'ny ankizy hatramin'ny dimy taona, izay misy vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 2,99 euro ary avy amin'ny rindranasa sasany izay nanjary ampahany tamin'ny The Best of 2015 tany Russia. Little Green Riding Hood dia boky mifanentana tsara tiana amin'ny iPad, izay tsy maintsy hilalaovan'ny ankizy kely raha mamaky azy isika na mihaino tsotra azy ireo alohan'ny hatory.
Little Green Riding Hood dia manome sary mahafinaritra antsika, miaraka amin'ny endri-tsoratra mahafinaritra amin'ny tantara mamirapiratra miaraka amin'ny fitantarana tena tsara. Ny tantara dia saika nitovy tamin'ny tany am-boalohany nosoratan'i Charles Perrault izay zazavavy kely, renibeny sy ny namany dia tsy maintsy mandositra amboadia noana.
Ny toetran'ny Hood mitaingina maitso kely
Toetra mahafinaritra izay hahafahan'ny zanatsika mifalifaly.
Ny sary dia namboarin'i Andrey Gordeev, mpamorona mari-pankasitrahana ao Cannes.
Ireo sarimiaina mihetsiketsika dia hitondra ireo ankizy kely mankany amin'ny tontolon'ny majika amin'ny tantara.
Ny kely koa dia manana lalao mini maromaro hahafinaritra raha mankafy azy ireo alohan'ny hatory.
Ny bokin-tsakian'i Bebe misy resipeo marobe hitazomana sakafo mahasalama.
Amin'ity karazana boky misy ifandraisany ity dia tena zava-dehibe ny fitantarana ary ny mpandrafitra ny Little Green Riding Hood dia nanisy peta-kofehy azy ary mahafinaritra izany. Little Green Riding Hood dia mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch amin'ny iOS avy amin'ny kinova fahafito.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Little Green Riding Hood, lalao maimaim-poana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
Mijanona any Espana indray i Apple Pay
Apple no orinasa be mpitia indrindra eran'izao tontolo izao araka ny filazan'ny gazety Fortune